Na July a na-echeta Totò a ma ama: ndụ ya na |ka | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Na Julaị a na-echeta Togba a ma ama: ndụ ya na Churchka
di Paolo Tescione - Julaị 7, 2020
na-eli ozu nke Santa Maria delle Lacrime, jikọtara ụka dị nso nke otu aha, a raara nye a obere nkume nsọpụrụ nke Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis nke Byzantium - notali mara mma na-asọpụrụ aha ha na aha nna ha ziri ezi? - a maara nke ọma dị ka "Totò", azịza Italiantali nye Charlie Chaplin na ikekwe otu n'ime ndị na-eme egwuregwu na-atọ ọchị kachasị ndụ.
Anabatara n'ime ezinụlọ Neapolitan a ma ama dị ka nwa okorobịa, Totò tụgharịrị gaa ụlọ ihe nkiri ahụ. Na akụkọ ihe nkiri ọkọlọtọ, a họọrọ Totò yana Chaplin, Marx Brothers na Buster Keaton dị ka ihe ngosi nke "kpakpando nkiri" nke iri afọ mbụ nke ụlọ ọrụ ihe nkiri. O dekwara ezigbo uri, na mgbe o mechara okenye, o guzobekwara onwe ya dika onye na-eme ihe nkiri di egwu nke nwere oke ọrụ.
Mgbe Totò nwụrụ na 1967, a ga-eme ememe olili ozu atọ dị iche iche iji nabata nnukwu ìgwè mmadụ chọrọ ịpụ. Na nke atọ, nke a na-eme na Basilica nke Santa Maria della Santità na Naples, naanị mmadụ puku abụọ, puku iri abụọ, 250.000 jupụtara na mbara èzí ahụ na n'okporo ámá ndị dị n'èzí.
Emepụtara site na onye ọkpụ Italy bụ Ignazio Colagrossi ma jiri ọla nchara mee ya, ihe onyonyo ọhụụ gosipụtara onye omee ahụ ka ọ na-adanye n'ili ya na-eji okpu ya, yana ọtụtụ ahịrị site na uri ya. Onye ụkọchukwu nọ na mpaghara ahụ duziri emume ahụ, wee nye ngọzi nke ihe a kpụrụ akpụ.
Ndị whotali tolitere na fim nke Totò - enwere 97 n'oge ọrụ ya dị egwu, tupu ọ nwụọ na 1967 - nwere ike iju ya anya na enweghị ncheta ruo ugbu a. Nye ndị na-anọghị na peninsula ahụ, nke a nwere ike ịdị ka mmepe nke ọdịmma mpaghara, njirimara mana ọtụtụ adịghị mkpa.
N'agbanyeghị nke ahụ, dịka ọ na-adịkarị na Italy, akụkọ banyere akụkọ ihe mere eme karịrị akarị.
Lee ihe a: E liri Tokota n’ili olulu Katoliki na ihe ọkpụkpụ ọhụrụ n’ebube ya ka onye ụkọchukwu Katọlik gọziri agọzi. Ka osila dị, n’oge To Tosh, o nwere mmekọrịta na-ese okwu na Chọọchị, a na-ahụkarịkwa ya n’aka ndị isi ụka dị ka onye mmehie n’ihu ọha.
Ihe kpatara ya, dịka ọ na-emekarị, bụ ọnọdụ alụmdi na nwunye ya.
Na 1929, nwa agbọghọ bụ Totò zutere otu nwanyị aha ya bụ Liliana Castagnola, onye ọbụ abụ a ma ama nke ya na onye Europe nọ n'ụbọchị ahụ nọ. Mgbe Totò kwụsịrị mmekọrịta ahụ na 1930, Castagnola gburu onwe ya na enweghị olileanya site na ịmịnye otu ọkpọkọ ọgwụ ụra. (Ugbu a, a na-eli ya n'otu crypt na Toto.)
Ikekwe nke ọnwụ ya wutere ya, Totò malitere mmekọrịta ngwa ngwa na nwanyị ọzọ, Diana Bandini Lucchesini Rogliani, na 1931, onye bụ 16 n'oge ahụ. Ha abụọ lụrụ na 1935, mgbe ha mụsịrị nwa nwanyị nke Totò kpebiri ịkpọ "Liliana" mgbe ịhụnanya mbụ ya gasịrị.
Na 1936, Totò chọrọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye wee nweta nkwado iwu obodo na Hungary, ebe ọ bụ na o siri ike inweta na attali n'oge ahụ. Na 1939, ụlọ ikpe recognizedtali nakweere iwu alụkwaghịm Hungary, na-akwụsị alụmdi na nwunye nke ọma na steeti Italiantali.
Na 1952, Totò zutere onye na-eme ihe nkiri aha ya bụ Franca Faldini, onye dị naanị afọ abụọ karịa nwa ya nwanyị na onye ga-abụ onye ibe ya na ndụ ya niile. Ebe ọ bụ na Churchka Katọlik abanyela aka na mbibi nke alụmdi na nwunye mbụ nke Totò, a na-akpọkarị ha abụọ "ndị iko nwanyị" ma kwadoo dị ka ihe atụ nke ụkpụrụ omume dara ada. (Nke a, n'ezie, dị tupu oge Amoris Laetitia, mgbe ọ nweghị ụzọ isi mee ka mmadụ dị n'otu n'ụdị ọnọdụ a.)
Otu asịrị a ma ama kwuru na Totò na Faldini haziri "alụmdi na nwunye adịgboroja" na Switzerland na 1954, ọ bụ ezie na na 2016 ọ gara n'ili ya na-agọnahụ ya. Faldini kwusiri ike na ya na Totò echeghị na ọ dị mkpa ka nkwekọrịta iji mezie mmekọrịta ha.
Echiche nke ịbụ onye a chụpụrụ na Chọọchị bụ ihe na-egbu mgbu nye Totò, onye, ​​dịka akụkọ nwa ya nwanyị si kwuo, nwere ezi okwukwe Katọlik. Abụọ n'ime fim ya na-egosi na ya na Saint Anthony na-akparịta ụka, Liliana De Curtis na-ekwukwa na ya na Anthony na ndị nsọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ na-enwe mkparịta ụka yiri nke ahụ n'ezie.
Ọ sịrị, "O kpere ekpere n'ụlọ n'ihi na ọ dịghịrị ya mfe isoro ezinụlọ ya jee chọọchị dịka ọ gaara masị, site na ncheta na mkpa, a ga-agọrọ ya udo ma ọ gosi.
Dabere na De Curtis, Totò na-ebu otu akwụkwọ Oziọma na chaplet osisi ebe ọ bụla ọ gara, ma nwee nnukwu mmasị na ilekọta ndị agbata obi nọ ná mkpa - site n'ụzọ, ọ na-agakarị n'ụlọ ụmụ mgbei dị nso iji butere ụmụaka ụmụaka egwuregwu n'oge afọ ndụ ya. Mgbe ọ nwụrụ, a tọgburu ozu ya na ùkwù okooko osisi na ihe oyiyi nke ọ hụrụ n'anya Saint Anthony nke Padua n'aka ya.
De Curtis kwuru na n'oge Jubilee nke ndị nka na 2000, ọ nyere Kadinal Crescenzio Sepe nke Naples onyinye rosary nke Totò, bụ onye mere emume ncheta nke onye omee ahụ na ezinụlọ ya.
Na mkpokọta, anyị na-ekwu maka otu kpakpando nke ndị ụka nọrọ ebe dị anya n'oge ndụ ya, mana onye na-etinyezi ebighi ebi na ịbata Chọọchị, ya na onyogho nke nsọpụrụ nke Nzukọ-nsọ ​​gọziri.
N'ime ihe ndị ọzọ, ọ bụ ihe ncheta banyere ike ịgwọ ọrịa nke oge - nke nwere ike, nwere ike, kpọọ ụfọdụ echiche ka anyị na-atụgharị uche na mmeghachi omume anyị na-ewekarị iwe na esemokwu na ndị ọjọọ taa.